Mhepo Inodzora Outlet
HCC Ford Visteon Compressor Magnetic Batanidza
Compressor Kudzora Valve
Delphi Compressor Kudzora Valve
Denso Compressor Kudzora Valve
Sanden Compressor Kudzora Valve
Valeo Zexel Compressor Kudzora Valve
mugamuchiri drier kuvat
Chombo che AC
Nyowani Simba AC
DC Michina Compressor
Yakabatanidzwa Magetsi Compressor
Kuparadzanisa Electric Compressor
Bhazi remhepo kutonhodza
TM31 QP31 DKS32 auto ac compressor 2A kana 2B clu ...
PXE13 VW compressor kudzora vharafu
Handheld Manual Hydraulic Hose Kupwanya Turu
Yakabatanidzwa Rori Kupaka Mhepo Inodzora
BMW Blower mota 64119227670 LHD
Auto AC Pipe Casing Chishandiso chefiriji hosi ...
YeMota Ekugadzirisa Mhepo Inotsiva Zvikamu Uye Ac Zvishandiso
Yedu yekutengesa timu inotsetsenura chiGerman, Russian, Spanish uye Portuguese.
Rinenge gore rimwe garandi, imwe imwe nehafu kana kunyange makore maviri garandi.
Yakazara mhando yezvikamu zveac
Vashandi vehunyanzvi vane makore anopfuura makumi maviri ezviitiko uye vanoita mune zvese auto a / c zvigadzirwa zvine hukama uye zvikamu zvefiriji Tinogona zvakare kukudziridza zvinhu zvinoenderana nevatengi 'sampuro.
Seye nyanzvi bhizinesi rinotengesa kunze auto air conditioning (A / C) zvikamu, Ningbo Bowente Auto Parts Co, Ltd inozvipira kupa vatengi vayo neOEM, ODM, OBM, uye Aftermarket Services. Iyo kambani inonyanya kubata mune auto a / c zvigadzirwa zvine hukama senge auto ac compressor, magnetic clutch, vharuvhu yekudzora, condenser, evaporator, inogamuchira yakaoma, yekuwedzera vharuvhu, yekumanikidza switch, yemagetsi fan, blower mota, uye ac zvishandiso, pakati pevamwe. Kupa inoshanda uye yehunyanzvi sevhisi kune vatengi vayo, kambani inozvirumbidza yetimu yekutengesa iyo inokwanisa Chirungu, Spanish, Portuguese, Russian, German, French, uye Japan, nezvimwe
Bowente Auto Zvikamu (BWT). Yako Yekutanga YeMotokari A / C Zvikamu Zvekutengesa.
Seye nyanzvi bhizinesi rinotengesa kunze auto air conditioning (A / C) zvikamu, Ningbo Bowente Auto Parts Co, Ltd inozvipira kupa vatengi vayo neOEM, ODM, OBM, uye Aftermarket Services. Iyo kambani inonyanya kubata mune auto a / c zvigadzirwa zvine hukama senge auto ac compressor, magnetic clutch, vharuvhu yekudzora, condenser, evaporator, inogamuchira yakaoma, yekuwedzera vharuvhu, yekumanikidza switch, yemagetsi fan, blower mota, uye ac maturusi, pakati pevamwe. Kupa inoshanda uye yehunyanzvi sevhisi kune vatengi vayo, kambani inozvirumbidza yeboka revatengesi iro rine hunyanzvi muChirungu, Spanish, Portuguese, Russian, German, French, uye Japan, etc.
Bowente Auto Zvikamu ( BWT ). Yako Yekutanga Auto chinangwa A / C Zvikamu Zvekupa
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa gumi nemaviri.
Chikamu 803, Kuvaka B3 Tsvagurudzo uye Development Park, Yangfan Road 999, High Tech Zone, Yinzhou District, Ningbo, 315040, China
Kudzvinyirira Kwakanyanya Shanduko, Kupisa Resistor, Webhu Blower Motor, Mota Ac Pressure Chinja, Blower Motor Resistor 4 Pine, Mota Blower Resistor,